Kutaurirana Kana Matare Ndizvo Chete Zvinopedza Gakava Riri muMDC-T
Kubvumbi 26, 2018
Muzvare Khupe naVaChamisa
Magweta anoti gakava riri pakati paVaNelson Chamisa naMuzvare Thokozani Khupe rekuti ndechipi chikwata chine kodzero dzekushandisa zita rekuti MDC-T rinogona kupedzwa chete nematare kana nhaurirano dzekuumba bato rimwe chete rakasimba.
Mamwe magweta anoti kukakavadzana pakati paVaChamisa naMuzvare Khupe panyaya yekuti ndiyani mutungamiri weMDC-T chaiye kunopera chete kana nyaya iyi yazeyiwa mumatare.
Gweta remuHarare rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaJeremiah Mutongi Bhamu, vaudza Studio 7 kuti mutongo wakaturwa nemutongi wedare repamusoro muBulawayo nemusi weChipiri, VaFrancis Bere, uri pachena kuti nyaya iyi inogadziriswa chete nematare.
VaBhamu vati pakati paVaChamisa naMuzvare Khupe hapana anokwanisa kurambidza mumwe kuita chinhu achishandisa zita rekuti MDC-T kudzamara matare agura kuti mutungamiri weMDC-T chaiye ndiyani.
Rimwe gweta uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti mutongo waVaBere unoburitsa pachena kuti MDC-T yatsemuka nepakati zvakare.
VaMavhinga vati gakava riri muMDC-T pari zvino rinogona kugadziriswawo nekutaurirana pakati paVaChamisa naMuzvare Khupe vachiti kazhinji kacho nyaya dzezvematongerwo hadziwanzoda kuendeswa kumatare.
VaMavhinga vati mapoka maviri aya anosara asina kusimba pamberi pesarudzo kana akaramba kudzokerana kuti aite chinhu chimwe.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nebenhau reNewsDay anoti mapoka maviri eMDC-T aya akzvipira kuita nhaurirano dzekuti abatane zvakare.
Aka hakasi kekutanga kuti bato iri ritsemuke.
VaWelshman Ncube, avo vave kutungamira rimwe bato riri kuzvidaidza kuti MDC vakapatsanurana nevaimbova mutungamiri webato iri VaMorgan Tsvangirai muna 2005 zvakazopa kuti VaTsvangirai vadaidze bato ravo kuti MDC-T munguva dzesarudzo kunyange hazvo zita rebato riri MDC.
Makore mashanu akatevera, vaimbove mumiriri weMDC mu St Marys, VaJob Sikhala, vakabudawo muMDC vachinoumba bato ravo reMDC99 muna 1010
Mushure mesarudzo dzemuna 2013, VaTsvangirai vakapatsanurana zvakare nevaimbove munyori mukuru muMDC, VaTendai Biti, nevamwe vakaita saVaElton Mangoma, vakanoumba bato ravo.
Asi vaviri ava havana kugarisana zvakanaka, vachibva vazvipatsanura VaMangoma vachinoumba bato ravo rinonzi Renewal Democrats of Zimbabwe, ukuwo VaBiti vachiumba People’s Democratic Party.
VaBiti vakapatsanuranawo nevamwe vavo, bato iri rikaita vatungamiri vaviri, VaBiti vari kwavo, ukuwo Amai Lucia Matibenga vachitungamirawo imwe People’s Democratic Party.
VaNcube vakapatsanuranawo nevamwe vavo vakaita saVaMoses Mzila mushure mekunetsana.
VaTsvangirai vasati vashaya, vakashanda zvakasimba kuti VaBiti naVaNcube vapinde mumubatanidzwa weMDC Alliance, uyo vari kuenderera mberi vachitsigira VaChamisa.